Chelsea oo ku guuleysatay Koobka UEFA Super Cup+Sawirro +Video
Thursday August 12, 2021 - 15:58:24 in Wararka by Mogadishu Times
Kooxda Chelsea ayaa ku guulesatay Koobka UEFA Super Cup kaddib markii ay guul kaga gaartay naadiga Villarreal rigoorayaal 6-5 kulan leysku daalay oo waqti dheeri ah la aaday kaasoo ku dhammaaday bar-bardhac 1-1 ah.
Qeybt hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 1-0 ay ku hoggaamineysay kooxda reer England ee Chelsea.
Daqiiqadii 27-aad kooxda Chelsea ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta, kaddib markii uu 1-0 ka dhigay Hakim Ziyech, oo caawin ka helay saaxiibkiis Kai Havertz.
73 daqiiqo marka ay dheesha mareysay kooxda Villarreal ayaa dhalisay goolka bar-bardhaca, kaddib markii uu 1-1 ka dhigay ciyaarta Gerard Moreno,axaana goolkan ka caawiyay Boulaye Dia
90-ka daqiiqo ee loogu talagalay kulanka ayaa wuxuu ku soo idlaaday bar-bardhac 1-1 ah oo ay isku mari waayeen labada kooxood Chelsea iyo Villarreal, waxaana la aaday 30 daqiiqo oo waqti dheeri ah, si loo xaqiijiyo kooxda ugu dambeyn loo caleemo saarayo ku guuleysiga koobka UEFA Super Cup.
Ugu dambeyntii kooxda Chelsea ayaa ku guuleysatay Koobka UEFA Super Cup, kaddib markii rigoorayaal 6-5 ah ku garaacday naadiga Villarreal, Kaddib ciyaar aad u xiiso badan oo ka dhacday garoonka Windsor Park ee Northern Ireland.